पूर्वमाननीय बानियाँ भन्छन्– महारानीलाई मदन पुरस्कार अनपेक्षित उपलब्धि « Tuwachung.com
ध्रुवसागर शर्मा	२०७७ आश्विन १७, ०८:१६
इतिहासका जानकार तथा लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँले तत्कालीन पर्वत राज्यको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखेको ‘महारानी’ उपन्यासले २०७६ को मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि अहिले साहित्यकार बानियाँको चर्चा चुलिएको छ । उनले यसअघि ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य’, ‘खस जाति र कुलपूजा’ र ‘मृत्यु संस्कार मन्थन’ गरी तीन कृति प्रकाशित गरिसकेका छन् । उपन्यास लेख्दाको पृष्ठभूमि, मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछिको अनुभूति र आगामी योजनाबारे ध्रुवसागर शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
२०७६ सालको मदन पुरस्कार तपाईंको उपन्यास ‘महारानी’ले प्राप्त गरेकोमा हार्दिक बधाइ । देशकै प्रतिष्ठित पुरस्कार पाउँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
प्राप्ति आफैंमा सुखकारक विषय हो । त्यसमा पनि अनपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनु थप आनन्दको विषय हुने नै भो । तर, मलाई भने उपलब्धिभन्दा मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।
त्यस्तो अनुभूतिका कारण के होला ?
लेख्ने कोसिस त गर्दै छु । भविष्यमा पनि प्रयत्न निरन्तर रहनेछ । तर, आफ्नै लेखनशिल्पसँग सन्तुष्ट हुन सकिएको छैन । मेरो भावना र मेरो जानकारीको संयोजन गरेर सुन्दर रचना गर्न मेरो कलमले सक्तैन । मेरो त्यही अनुभूतिले मदन पुरस्कार प्राप्त लेखकको गरिमा गौरव थाम्न सकिन्न कि भन्ने लाग्ने हो । त्यसमाथि म अलि अल्छी छु । घुमफिर गर्न रुच्दैन । अन्तक्र्रिया र संवाद गर्ने बानी पनि छैन ।
उपन्यासमा कलम चलाउने र त्यो पनि ऐतिहासिक विषयवस्तु छान्नुपछाडिको कारण के थियो ?
उपन्यासमा कलम यसअघि पनि चलाउने कोसिस गर्थें । दुर्घटनावश ती लेखोट पाठकका हातसम्म पुग्ने अवसर नपाइकनै मृत्युवरण गर्ने दुर्नियतिको सिकार भए । जहाँसम्म पर्वतको इतिहासलाई विषय बनाउनुका कारण के थियो भन्ने प्रश्न हो, त्यससँग मेरो निजी भावना पनि गाँसिएको छ । चौबीसे राज्य पर्वतको समाजमा ‘आठ हजारका राजा, बाह्र हजारका बानियाँ’ भन्ने लोक कथन जीवित छ । त्यो भनेको तत्कालीन मल्ल राजवंशले आर्जन गरेको आठ हजारमा बानियाँको पाखुरीले १२ हजार घरधुरी थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
अर्थात् तत्कालीन पर्वत राज्यको निर्माणमा मेरा पुर्खाको रगत पसिना भिजेको थियो । दुर्भाग्यवश पवर्तको त्यो इतिहास लेखिएन । पर्वत राज्यको अस्तित्व मेटिए पनि म त्यही माटोमा जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । पुर्खाको त्यो माटो, त्यो इतिहासप्रति मेरो मनमा अगाध श्रद्धा र गौरव छ । त्यसैैले त्यही इतिहास उधिन्न विषय चुनिएको हो । अर्को कुरा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकिने लोककथनमा बाँचेको इतिहास लिपिबद्ध गर्ने समाजसमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न पनि यो विषय रोजेको हुँ । अर्थात् यो लेखन आवश्यकताको उपज हो ।
उपन्यासमा आन्तरिक सत्ता संघर्ष, अरन्तरदेशीय षड्यन्त्र, द्वन्द्व र त्यसैमा घुनझैं पिसिएकी राजकुमारीको कथा छ । उपन्यासमा परेका ती घटनावली सत्य हुन् ?
तथ्यद्वारा प्रमाणित गर्न सकिने घटना हुन्थे भने इतिहासमै लेखिन्थे । उपन्यास सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । ‘महारानी’ ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित उपन्यास हो । सम्पूर्ण इतिहास होइन । सत्य कुरा कतिमात्रै हो भने घनश्याम मल्लका दुई विमातृक भाइबीच सत्ता संघर्ष चलेको र दाइद्वारा भाइको हत्या भएको कुरा सत्य हो । भद्रिबमको हत्यापछि उनकी रानी बेपत्ता भएको वा पारिएको कुरा पनि सत्य हो । तर, त्यो घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी छैन । विश्वसनीय भौतिक साक्षी पनि उपलब्ध छैन । त्यही अन्धकारमा रहेको इतिहासको पाटो अर्थात् खाली ठाउँ भर्न कथानक रचना गरिएको हो ।
त्यसो हो भने ‘महारानी’ उपन्यासलाई पाठकले कसरी बुझ्दा ठीक होला त ?
माथि नै भनिसकेको छु कि समाजमा लोककथनका रूपमा बाँचेको कथा–गाथाहरू ऐतिहासिक घटना नै हुन् । समयक्रममा सत्य कुरा कुना पर्दै गयो । त्यसमा अनेक नयाँ फूलबुट्टा थपिए । भरिए । सत्य इतिहास भ्रमपूर्ण कथाको छाँयामा बिलुप्त भयो । ‘महारानी’ उपन्यासले त्यही भ्रमको थुप्रोबाट इतिहास उधिनेर बाहिर निकाल्ने कोसिस गरेको हो । त्यसैले उपन्यासको प्रारम्भमै यो ‘इतिहास पुनर्लेखनको प्रयत्न हो’ भनिएको हो ।
उपन्यासमा वर्णित घटनाजस्तो अपेक्षाकृत कम उमेरकी विश्वप्रभामा रहेको असाधारण त्यागको भावना, घनश्याममा रहेको न्यायप्रियता र सुमन्तको विज्ञताजस्ता विषय पाठकका लागि अलिक अस्वाभाविक लाग्लान् कि भन्ने लागेन ?
मानिसको योग्यता, क्षमता र भावनाको मापदण्ड उमेर हुने होइन । कैयौं मानिसमा असाधारण प्रतिभा हुन्छ । उपन्यासमा वर्णित पात्रहरूको चरित्र अस्वाभाविकजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया कतैबाट आएको छैन । स्वभावतः परिस्थितिअनुसार चरित्रमा अलिकता रंगरोगन गरिनु अस्वाभाविक मानिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
उपन्यासमा ‘डोली दिने’ प्रथाको चर्चा गरिएको छ । त्यो परम्परा यथार्थ हो कि काल्पनिक ? यथार्थ हो भने यतिखेर किन प्रचलनमा छैन ? कुनै ऐन कानुनद्वारा राज्यले हटाएको पनि देखिँदैन त ?
डोली दिने प्रथा खासगरेर ठकुरी समाजमा रहेको परम्परा हो । त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी मेरो पुस्ता छ । त्यो अनौठो विषय पनि होइन । उपयुक्त वरमा आँखा परेपछि जुनसुकै बाबुआमा आफ्नी छोरीको हात थमाउन उत्सुक रहन्छन् । प्रत्यक्ष परोक्ष त्यस्तो पहल हुन्छ । त्यही चलनको औपचारिक नामकरण ‘डोली दिने’ प्रथाका रूपमा भएको हो । ठकुरी समाजले नाम दिएकोमात्र हो । अहिले पनि उमेर पुगेकी छोरीका निमित्त उपयुक्त वर खोज्ने चलन हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । अर्को अर्थमा त्यो पनि डोली दिने प्रथाकै निरन्तरता हो ।
ऐतिहासिक पर्वत राज्यको कथा ‘महारानी’मा सम्पूर्ण समेटिएको छैन । कमसेकम पर्वत निर्माण, विस्तार विभाजनसम्मको कथा परेको छ । पर्वतमा मल्ल वंशले शासन गरेको ५०० वर्षमध्येको पछिल्लो ३५० वर्षको इतिहास संक्षिप्तमा आएको छ । अझै १५० वर्ष बाँकी रहन्छ । बाँकी इतिहास आउनेगरी अर्को एउटा उपन्यास लेख्नुपर्ने आवश्यकता अनुभूत गरेको छु । परिणाम भविष्यको हातमा ।
‘महारानी’ उपन्यास सिर्जना गर्दाका कठिनाइ के–कस्ता रहे होलान् ?
पहिलो कुरा तत्कालीन खस भाषिकाको खोज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पर्वत राज्यकालका सीमित लेखोट उपलब्ध छन् । कैयौं लेखोट ‘डिकोट’ गरिदिने विज्ञको आवश्यकता पर्छ । पाँच सय वर्षको लामो अवधिमा लेखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी लेखोटबाट भाषाको नमुना निकाल्नु निकै गाह्रो काम हो । किनकि भाषा निरन्तर विकासशील हुन्छ, परिविर्तनशील हुन्छ । पाँचसय वर्षमा त भाषामा आनको तान फरक परिसक्छ । दुई सय वर्षमै भानुभक्तको रामायणमा प्रयुक्त भएको भाषिका पूर्ण रूपमा विलोप भएको उदाहरण हाम्रासामु साक्षी छ ।
दोस्रो कुरा तत्कालीन समाजका रीतिथिति, परम्परा र संस्कार संस्कृति पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । इतिहासको एउटा तथ्य समातेर त्यसकालको वरिपरि कथा बुन्नुपर्छ । कथा लेखेरमात्रै पुग्दैन, त्यसलाई रुचिकर र विश्वसनीय पनि बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा पर्वतको हकमा नलेखिएको इतिहासभित्र सत्य तथ्यको नजिक पुग्न स्थानीय समाजसँग मात्र होइन, भूगोलसँग पनि घनिभूत अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । परिचय स्थापित गर्नुपर्छ । मेरो जन्म त्यही भूगोलमा भएको हुनाले अलिकता सुविधा रहने नै भयो ।
भविष्यको साहित्यिक यात्राको योजना के–कस्तो बनाउनुभएको छ ?
अवश्य । मदन पुरस्कारले मलाई थप घोटाउने नै भयोजस्तो लागेको छ । मैले बुताले भ्याएसम्म लेख्नेछु । लेख्नैपर्छ । मेरो लेखन विषयको प्राथमिकतामा भने आफ्नै जन्मभूमि, आफ्नै माटो, आफ्नै समाज र आफ्नै इतिहास हुनेछ । मेरो समाजसँग गाँसिएका दुई/चार कथा मेरो मनभित्र खेलिरहेका छन् । तीमध्ये प्राथमकिता कुन विषयलाई दिने भनेर निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
‘महारानी’को प्रकाशनपछि पाठक प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? स्वाभाविक रूपमा अभिव्यक्त हुने सकारात्मक नकारात्मक पाठक प्रतिक्रियाले कस्तो अनुभूति गराउँदोरहेछ ?
लेखकका लागि पाठक प्रतिक्रिया प्रोत्साहनको विषयमात्रै होइन, सच्चिने सच्याउने अवसर पनि हो । लेखन तिखार्ने ओखती पनि हो । परिमार्जित लेखनको गुरु पनि हो । मेरो दुर्भाग्य के रहिदियो भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पटक्कै आएन ।